Imifanekiso engama-50 + yeentyatyambo zikaRhulumente-Uluhlu lweentyatyambo zaseMelika - Igadi
Imifanekiso engama-50 + yeentyatyambo zikaRhulumente-Uluhlu lweentyatyambo zaseMelika
Iowa ine-Rose Rose kwaye iMississippi ineMagnolia. (Kwaye ukuba uyazibuza malunga ne-56, kungenxa yokuba sibandakanye iSithili saseColumbia kunye neminye imimandla yase-US, nayo!) Jonga ukuba yeyiphi intyatyambo enevumba elimnandi enesisindo kwilizwe lakho.
Jonga igalari 56Iifoto UKyle LinImifanekiso kaGetty 1Kwi-56IAlabama: ICamellia
IAlabama itshintshele igolide camellia ngo-1959. Le ntyatyambo igqunyiweyo, ephakama ngoJanuwari nangoFebruwari, yeyaseAsia.
IWestend61Imifanekiso kaGetty MbiniKwi-56I-Alaska: Ndilibale-mna
Ngokwesiqhelo ifunyanwa kwi-alpine meadows, IAlaska bamkele ukulibala kum xa bengena ngokusemthethweni kuManyano.
Imifanekiso kaGetty 3Kwi-56IAmerican Samoa: Teuila
IAmerican Samoa ibhiyozela le ntyatyambo ibomvu intle minyaka le Umnyhadala weTeeila ngoSeptemba.
USylvia SchugImifanekiso kaGetty 4Kwi-56IArizona: Intyatyambo iSaguaro Cactus
Qhwanyaza kwaye uyakuyikhumbula-i I-Saguaro cactus iyaqhakaza , Efumaneka ikakhulu kwiNtlango iSonoran, ihlala kuphela ebusuku.
UMonty RakusenImifanekiso kaGetty 5Kwi-56IArkansas: Iapile Blossom
'Umbuso weNdalo' wakha wavelisa ngaphezulu 400 iintlobo zeapile unyaka.
Imifanekiso kaGetty 6Kwi-56California: California Poppy
Phawula ikhalenda yakho: UTshazimpuzi 6 lusuku lweCalifornia Poppy. Isazi sendalo u-Adelbert Von Chamisso wanika intyatyambo igama layo , Eschsholtzia calonelica , xa wafika eSan Francisco ngo-1816.
UJessica SolomatenkoImifanekiso kaGetty 7Kwi-56IColorado: Intaba yaseRocky Columbine
Umqobi wentaba uEdwin James bafumanisa obu buhle bumfusa kwiPikes Peak ngo-1820.
UWilliam BrittenImifanekiso kaGetty 8Kwi-56IConnecticut: Intaba yaseLaurel
Oku shrub ethandekayo yaziwa ngokuba yi 'Calico Bush' okanye 'Spoonwood.'
UHerbert KehrerImifanekiso kaGetty 9Kwi-56I-Delaware: Peach Blossom
Hambisa ngaphaya, Georgia - Delaware Yayisaziwa njenge 'Peach State,' kunye neentlobo ezingaphezu kwe-800,000 ngaphakathi kwemida yayo.
UJerry paviaImifanekiso kaGetty 10Kwi-56Isithili seColumbia: Ubuhle baseMelika uRose
Nangona ingengobuchwephesha, urhulumente ISithili saseColumbia inentyatyambo esemthethweni- kwaye ayisiyiyo intyatyambo yetsheri. I-American Beauty Rose iyaqhakaza entwasahlobo ukuya ekuqaleni kwehlobo kwaye inokukhula ibe ziikubhite ezili-15 ubude.
UKristen JohansenImifanekiso kaGetty Shumi elinanyeKwi-56IFlorida: I-Orange Blossom
Ayisiyongxaki ye-O.J kuphela. -I intyatyambo enevumba elimnandi ivelisa ivumba eligcwalisa umbindi nomzantsi weFlorida ngexesha lamaxesha aphezulu.
URichard Mawer / EyeEmImifanekiso kaGetty 12Kwi-56IGeorgia: ICherokee Rose
Isihlahla esihlala sinyuka zihlala zihlala ziluhlaza Cherokee wavuka inokukhula kwimeko eyomileyo eMzantsi Melika kodwa inene iyinzalelwane yase China.
Imifanekiso kaGetty 13Kwi-56IGuam: iBougainvillea
YeGuam intyatyambo yelizwe ikwabizwa ngokuba IPuti tai nobio Yaziwa njenge ntyatyambo ephepheni.
UJamie GrillImifanekiso kaGetty 14Kwi-56IHawaii: IHibiscus Ephuzi
Nangona isiqithi ngasinye sinentyatyambo yaseburhulumenteni, i I-hibiscus emthubi , okanye pua aloalo, yaba yintyatyambo yaseburhulumenteni ngo-1988.
UPaul HarrisImifanekiso kaGetty Shumi elinantlanuKwi-56Idaho: ISiringa
Inkqubo ye- Uhlobo lwe syringa igama, IPhiladelfase lewisii , uzukisa umphandi uMeriwether Lewis, owabhala isityalo kwincwadi yakhe.
Imifanekiso kaGetty 16Kwi-56I-Illinois: Violet
I-Illinois abantwana besikolo bakhethe i-violet ngo-1907 kwaye ukhetho lwabo oluhle lwabhalwa ngumthetho emva konyaka.
huoguangliangImifanekiso kaGetty 17Kwi-56I-Indiana: Peony
Uxolo, zinnia-abalandeli - the I-peony ithathe indawo yobuhle obude njengentyatyambo yase-Indiana ngo-1957.
UTim ZurowskiImifanekiso kaGetty 18Kwi-56Iowa: URose wasendle
Abemi Bomthonyama baseMelika babebaxabisa rose yasendle amayeza ayo kunye neepropathi zesondlo. Lunyango lwendalo lweemeko zamehlo kunye nezifo zesisu.
UBrigitte SporrerImifanekiso kaGetty 19Kwi-56Kansas: ujongilanga
Inkqubo ye- ukuqaqamba okumthubi evezwe kwikota yesizwe kunye neflegi ikwabonakala nakwisiteketiso esisemthethweni: 'I-Sunflower State.'
UDavid EnglehardtImifanekiso kaGetty Amashumi amabiniKwi-56EKentucky: Goldenrod
Inkqubo ye- igolide ithathe indawo yebluegrass njengentyatyambo yaseKentucky ngo-1926 emva kokuba iiklabhu zokulima igadi zathi igalufa-oyithandayo yayimele ummandla omnye welizwe.
M UTimothy O'KeefeImifanekiso kaGetty amashumi amabini ananyeKwi-56Louisiana: Magnolia
Oku intyatyambo eluhlaza , eyafunyanwa kulo 'Mntwana waseMississippi,' yakhethwa ngo-1900.
Imifanekiso yeMint / UDavid ArkyImifanekiso kaGetty 22Kwi-56IMaine: ICone Pine emhlophe kunye neTassel
Inkqubo ye- Iphayini emhlophe yeyona conifer inkulu eMantla. Nwabisa: Igama elithi 'inquma' eneneni libhekisa kwiinaliti ezihlala ziluhlaza.
IZenShui / Michele ConstantiniImifanekiso kaGetty 2. 3Kwi-56EMaldin: Amehlo amnyama uSusan
Ilungu losapho lukajongilanga, uSusan onamehlo amnyama uqhakaza ngoMeyi ukuya ku-Agasti. Yachongwa njenge Intyatyambo yelizwe laseMaryland ngo-1918.
UDeni BrownImifanekiso kaGetty 24Kwi-56EMassachusetts: iMayflower
Ungayifumana le nto ityholo elirhubuluzayo ukukhula ehlathini. Isityalo esisengozini yokuphela siza ngeentlobo ezimhlophe nepinki.
IWestend61Imifanekiso kaGetty 25Kwi-56UMichigan: I-Apple Blossom
Kukhethwe iMichigan le ntyatyambo yemveli ngo-1897.
NguTombornino / EyeEm 26Kwi-56IMinnesota: I-Pink kunye ne-White Lady's Slipper
Inxalenye yeentlobo zeorchid, intyatyambo ichuma kwiindawo ezipholileyo, ezifumileyo. Urhulumente ulawule ingqokelela kunye nentengiso yentengiso yesityalo ngaphezulu kweminyaka engamashumi asibhozo.
A & MeImifanekiso kaGetty 27Kwi-56I-Mississippi: iMagnolia
Inkqubo ye- magnolia babetha intyatyambo kunye nekapa jasmine kunyulo lwe-1900. Kodwa indlu yowiso-mthetho yathatha ngaphezulu kweminyaka engamashumi amahlanu ukwenza uloyiso lube semthethweni.
URuud de UmntuImifanekiso kaGetty 28Kwi-56EMissouri: I-White Hawthorn Blossom
Ngaphezulu kwe-75 yeentlobo ze imithi ye-hawthorn inokufumaneka eMissouri.
elona silili lilungileyo lezinja
UKevin SchaferImifanekiso kaGetty 29Kwi-56Montana: Bitterroot
Ngummangaliso wegadi! Inkqubo ye- ukrakra , ekwabizwa ngokuba 'yintyatyambo yovuko,' inokuphila unyaka wonke ngaphandle kwamanzi.
U-Anthony-MastersonImifanekiso kaGetty 30Kwi-56Nebraska: iGoldenrod
Inkqubo ye- igolide Eqhakaza ngoJulayi ukuya ku-Okthobha, kwathiwa yintyatyambo yelizwe laseNebraska ngo-1895.
OkulandelayoIzinto ezili-15 zoLondolozo lweNdawo ezenziwa kwiiyadi zazo rhoqo ukuwa Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUSarah Yang Umhleli weWebhu Ndingumhleli wewebhu ku-ELLEDECOR.com, Housebeautiful.com, nakwiVeranda.com.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
igumbi lokuhlambela elimhlophe nelimnyama
vula amashalofu ekhitshini
ikea hacks bed loft
imihombiso yetafile yesidlo sangokuhlwa